Umthengisi webhasikidi waseChina nomhlinzeki wefektri Yuanda
1. IGAMA：Ibhasikidi enqola
3.ISICELO: Isethenjwa isithombe (Esamukeleka ngosayizi odingekayo)
4.Material: Plastic / Insimbi
5.Usage: Isuphamakethe, Inxanxathela Yezitolo, Isitolo
7.Umbala: Obomvu，luhlaza okotshani，ophuzi，okuluhlaza okwesibhakabhaka，mpunga (Imibala ngezifiso)
8.Logo: ngezifiso (logo yekhasimende ingaphrintwa)
Leli bhasikidi lokucindezela linomuzwa okhululekile, olula futhi olulula ukuwusebenzisa, ukwakheka okwenziwe ngabantu, okuqinile nokungasheleli. Umsebenzi oqondile wandisa umthamo othwala umthwalo. Kunezimbambo eziningi zokuqinisa ezansi ukuqinisekisa ukuthi ubhasikidi awunacindezelo emthwalweni. Umzimba osindayo, ukukhipha isisu kanye nokuvala inzalo, okukhishwe kuthuthukisa ukungena kwemoya, futhi akukho phunga elikhethekile emotweni. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo, ukucindezela okulula nokudonsa, imigomo ye-ergonomic, ifaneleka kakhulu, futhi ilula ukuyisebenzisa. I-LOGO eyenziwe ngezifiso, i-LOGO namaphethini ahlukahlukene angaphrintwa kwisibambo sebhasikidi wokuthenga. Abathengi badinga ukuhlinzeka ngamaphethini endaweni ekhethiwe bebodwa. Idizayini yenduku yokubopha, isibambo senduku ye-aluminium, izinto ezinhle kakhulu, ezilungele ukubambelela kahle, futhi kulula ukuzisebenzisa. Amandla athuthukisiwe, umthamo webhasikidi wokuthenga uyakhushulwa, ungabamba izinto eziningi, futhi ukusebenza kube namandla. Ukuthwala isisindo kuyaqiniswa, ubhasikidi wokuthenga uqiniswa ngokuqinile, futhi okuthwala isisindo nakho kuyaqiniswa, ukuze ibhasikidi likwazi ukubeka izinto ezisindayo. Ama-casters athule, ahambisana nokwelashwa kwenqubo okuthuthukisiwe, alula futhi aguquguqukayo ukusebenzisa, awukho umsindo, awubizi, futhi awugqoki.
Imikhiqizo esezingeni eliphakeme engu-1 ngobuchwepheshe bethu obunqenqemeni obunikezela imakethe yanamuhla.
Isilawuli esiqinile ekuhloleni.Silawula ngokuqinile izinto ezingavuthiwe.Silawula ngokuqinile inqubo yenqubo.
Uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi luhlukaniswe ngayo yonke imininingwane eyodwa, ngokulawulwa kwenziwa yonke indlela.
Izinto ze-4.Raw zayo yonke imikhiqizo zinekhwalithi enhle nokusebenza okuthuthukile, futhi lezo zezingxenye eziyinhloko kufanele zidlule ukuhlolwa kwekhwalithi.
Ukuhlolwa okuqinile kwikhwalithi yomkhiqizo kuyo yonke inqubo, ngesinyathelo ngasinye senqubo esidinga ukuzihlola kanye nezinyathelo ezimbili zenqubo ezilandelanayo ezidinga ukubhekisisa, ukuthola ukulawulwa okuphelele kumikhiqizo emisha.
1.Q:Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani?
A: Singabantu ngqo ifektri of esitolo eshalofini, ukubonisa ukuma kanye isitoreji yokubeka.
Ifektri yethu inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-31 sokuklama eshalofini, i-R & D, umkhiqizo nokwenziwe ngokwezifiso.Siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu yemitha engama-sqaure engaphezu kuka-50,000 eSuzhou edolobheni, esifundazweni saseJiangsu.
2.Q:Ungayithola kanjani i-quotatiivuliwe?
IMP: Siyakwamukela ukuze uchofoze "thumela uphenyo" noma uthinte i-Wechat / WhatsAPP: 0086 15150179453 I-imeyili: szyd@cnydhj.com
3.Q: Siyini isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile, zingakapheli izinsuku eziyi-15. Kuya futhi ngobuningi be-oda nokuklanywa kwethala.
4.Q: Uyini isikhathi sokukhokha?
A: Imigomo yokukhokha: 30% wediphozi lapho usayina i-PI, futhi ibhalansi izosuswa yi-T / T ngaphambi kokulethwa.
5.Q: Ingabe amasampula ayatholakala?
A: Yebo, amasampula ayatholakala nganoma yisiphi isikhathi. Sikhokhisa ezinye izindleko zesampula futhi sizoyibuyisa ngesikhathi se-oda elilandelayo.
Langaphambilini Ibhasikidi lesandla
Olandelayo: Ishelufu lephaneli emuva elibizayo
Ishalofu lesitayela saseMelika
I-European style trolley
Ikheli:IZhangcun Industrial Park, i-Wangzhuang Town, i-Changshu, iSuzhou Idolobha, Isifundazwe sase-Jiangsu, e-China